आधुनिक मङ्गाेलियालाई केन्द्रमा राखि अघि बढिरहेका एक युवा फाेटाेग्राफर · Global Voices नेपालीमा
अनुवाद पोष्ट गरिएको 26 सेप्टेम्बर 2020 18:08 GMT
यो लेख पढ्नुहोस् Italiano, Español, русский, Français, 日本語, Ελληνικά, English
उलानबाटर यसका पृथक जिल्लाहरू जहाँ झुन्डमा बनाइएका परम्परागत मङ्गाेलयन युर्ट पालहरूका कारण परिचित छ । यस क्षेत्रमा खनीज उद्याेगहरूकाे बाहुल्यता छ । तर उलानबाटरकाे द्रुत विकासले निम्त्याएकाे घातक प्रदुषणले नयाँ सामाजिक विभाजनहरू ल्याएकाे छ । र यसैका कारण याे राजधानी कुख्यात बन्दै गईरहेकाे छ । यहाँ भएकाे व्यापारिक फड्काेले सियाेल, टाेक्याे वा बेइजिङ जस्तै अत्याधुनिक शहरी भू–दृष्यकाे विकास गराएकाे छ ।
कुस जाेरिग्ट : म स्वअन्वेषणकाे एक यात्री हुँ । फाेटाेग्राफी, मेराे आफ्नाे निकट भएकाे पाए । शुरूवातका दिनहरूमा म दृष्यहरूसँग साक्षात्कार थिइन । मलाई फिल्म वा फाेटाेग्राफीमा कसैले कर गरेर लगाएकाे हैन । यसका बारेमा संगीतकाे अध्ययन गर्ने बेला केही ज्ञान भने थियाे । मैले ज्याज संगीतकाे नयाँ विधाकाे प्रयाेग गरे तर म एक परम्परागत परिवारमा हुर्किएकाे हुँ । मेरा अभिभावकहरू शास्त्रीय मङ्गाेलियन संगीतका प्राध्यापक हुनुहुन्छ । मेराे भाइ एक संगीत कम्पाेजर हाे । म आफै पनि वर्षाैदेखि हाम्राे परम्परागत वाद्यवादन माेरिन खुर बजाउन प्रशिक्षित छु । जब म एक पत्रकारका रूपमा काम गर्न थाले, मैले कला विधामा रिपाेर्टिङ गर्न थाले । मैले फेशन क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न व्यक्तिहरूकाे अन्तर्वाता गरेकाे छु । तीन वर्षअघि, एक फाेटाे सम्पादकका रूपमा म अर्काे सञ्चार गृहमा प्रवेश गरे । त्यहाँ फाेटाे निबन्धहरू तयार गर्नुका साथै अन्य फाेटाेग्राफरहरूलाई अनुबन्ध गर्नु मेराे मुख्य काम थियाे । त्यहीबेला मैले दृष्य कलाकाे प्रभावका बारेमा अनुभव गर्ने माैका पाए । त्यसपछि, साढे दुई वर्षअघि मैले एउटा क्यामेरा किने । आफूले आफूलाई नै प्रशिक्षित गरे र गएकाे वर्षबाट मैले तस्वीरमार्फत कथा भन्न थाले ।
फिलिप नुबेल : तपाईकाे हाल उलानबाटरकाे रेड गेर क्रियटिभ स्पेसमा प्रदर्शनरत प्रदर्शनी, हिँउद र शहरी प्रदुषण विषयवस्तुमा केन्द्रित छ । शहरसँग तपाईकाे सम्बन्धका बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ?
कुस जाेरिग्ट : म याे फाेटाे निबन्धमा पाँचवटा खण्डहरूमार्फत तीनवटा विषयहरूमा केन्द्रित हुन चाहेकाे थिए, जुन समकालिन जर्मन–ब्रिटिस संगीतकार, कम्पाेजर म्याक्स रिचरबाट प्रभावित थियाे । पहिलाे विषय हाे, सुन्दरताः म वर्षभरि नै यस शहरबाट सुन्दरता खाेज्न चाहन्छु । छाेटाे गर्मीयाममा बाहेक, उलानबाटरमा प्राय छिट्टै अन्धकार हुने गर्दछ । छ महिनासम्म रहने लामाे र ठन्डी हिँउदका यी तस्वीरहरूमा केही न केही त पक्कै छ । हिँउद राेमाञ्चक हुन्छ किनकि यसबेला हावा बाक्लाे हुने गर्दछ र एकदमै जाडाे हुन्छ, याे बेला लगभग माइनस ४० डिग्री सेल्सियस तापक्रम समेत हुने गर्दछ । मैले केही तस्वीरहरूमा प्रकाश र ठन्डी निलाेकाे मिश्रण देखाउन खाेजेकाे छुँ । म मानिसहरूले यसकाे महसुस गरून् भन्ने चाहन्छु ।
अर्काे विषय हाे, प्रदुषण र गन्जागाेल । यस शहरमा हुने प्रदुषण गेर जिल्लाबाट [यहाँका मानिसहरू जाँडाेबाट बच्नका लागि आफू बस्ने पालहरूमा काेइला बाल्ने गर्दछन्– सं.] आउँदछ र यहाँ गुड्ने कैयन् कारहरूले यसलाई बढावा दिईरहेकाे छ । गएकाे वर्ष प्रदुषणकाे अवस्था केही सुधाराेन्मुख थियाे तर शहर भने अझै पनि चरम प्रदुषणयुक्त नै छ । जसलाई हामीले नियमित भाेग्दै र देख्दै आएका छाैं र हाल आएर याे सामान्य झै भैसकेकाे छ । त्याे अवस्थालाई हामीले कसाे कसाे गरी देख्न पाएका थिएनाैं, त्यही भएर पनि त्यसलाई पनि म आफ्नाे तस्विरहरू मार्फत् देखाउन चाहन्थे । मैले यस प्रदर्शनीमा साेचबिचार गरी गेर जिल्लालाई समेटेकाे छैन किनकि यस ठाउँकाे आफ्नै कथा छ र यसकाे बारेमा म भिन्न कथा भन्न चाहन्छु । जति जति समय बित्दै जान्छ त्यति त्यति याे शहर मेराे लागि घनिष्ठ बन्दै जान्छ ।
कुस जाेरिग्ट : बिसाैं शताब्दिकाे प्रारम्भसम्म पनि हामीले चीनसँग हाम्र संस्कृती, संगीत, वास्तुकला र इतिहास समेत बाड्यौं। सन् १९२१ मा स्वतन्त्र भएपछि र १९९० मा प्रजातान्त्रिक क्रान्ति आएपछि हामी स्पष्ट विचारधारा भएकाे एक शक्तिशाली साेभियत–शैली शासनअन्तर्गत अघि बढ्याैं । यसले हाम्राेमा पश्चिमी शास्त्रिय संगीतकाे विकास हुनमा भूमिका समेत खेल्याे । यी दुई छिमेक राष्ट्रहरूले पक्कै पनि हामीलाई साँस्कृतिक रूपमा प्रभाव पारे । हामी प्रजातान्त्रिक रूपमा स्वतन्त्र भएकाे ३० वर्ष भईसक्याे तर हामी आज पनि हाम्राे साँस्कृतिक पहिचानलाई परिभाषित गर्न प्रयासरत छाैं । आज हाम्राे ज्याज संगीतले अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार तथा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न भ्याएको छ । तर शहरी वा आधुनिक कलाका रूपमा फाेटाेग्राफी एक नयाँ विधा हाे । धेरैजसाे व्यावसायिक फाेटाेग्राफरहरू भू–दृष्य, विवाह वा फेशन फाेटाेग्राफी विधामा आवद्ध छन् । अहिले यहाँ फाेटाेग्राफी विधामा नयाँ तरङ्ग सृजना भएकाे छ । धन्यवाद छ इन्स्टाग्रामलाई, यदि तपाईले #instameetulaanbaatar वा #ubeveryday ह्यासट्गाय खाेजी गर्नुभयाे भने तपाईले प्रशस्त फाेटाेहरू देख्न सक्नुहुन्छ । यसैले पनि म कलात्मक फाेटाेग्राफीमा केन्द्रित हुन चाहन्छु । गत वर्ष मैले एउटा लघु चलचित्रमा काम गरे । जसमा मैले शहरी कथामा केन्द्रित भई, विश्वका नागरिकहरूसम्म मङ्गाेलियाकाे काम देखाउने प्रयास गरेकाे छु ।
19 मार्च 2019आर्मेनिया